FAQ – Goldstarlive
Halkaan Waxaad ka heleysaa Su’aalaha dhamaan ay Qabaan Traderada ku Cusub Shirkada Goldstarlive ee Qeebta Afsomaliga ah.
Goldstarlive ma Borker baa?
Maya Goldstarlive Broker ma ahan, waa Shirkad Heshiis la gashay Investorada Caalami ah, si Invesotradana Lacag u sameeyaan, Traderada aan Heeysan Awood lacageed oo weyn siiyaan Jaanis.
Qaabkee ayaan Lacagta Kirada Accountiga ku bixinaya?
Soo Dagso App ka Sopay si Free ah https://sopayapp.com kadibna lacagta Kirada Accountiga ku shubo, adiga oo Tagayo Bakaal ama kaga Shubo transfergalaxy hadii aadan Somaliya Joogin, waa Shirkad Somaliyeed, waxaad si toos ah ula Xiriiri Kartaa Supportigooda ama Support Team Goldstarlive. Credit Card iyo Paypal waad ku bixin karta sido kale balse Lacag yar baa ku koreyso.
Maxay ku kala Duwanyihiin Accountiyada 50kun iyo 25Kun Dollar?
Account 50,000 Dollar, Trade ka Habeen waad uga seexan karta, waa hadii aad 10% ku dartid waa lagu jibaaraya, waxa uu kaga Jaanis wacnyahay in aad furan kartid Trade yo kabadan mid 25ku, Dadka Doonay Fa’ido fiican baa loogu Talagalay.
Maalintii Imisa ayaan Qasaari karaa?
Ma jirto wax limid ah Maalinti, waxaad Qasaaro gali kartaa ilaa 10% bilaa Sawab.
Maxay Tahay Sababta Bishii aan Lacagta u bixinayo?
Lacagta Waxaad ku Kireysaneysaa Accountiga aad Doneysid Bishi, Investors waxay u Kirenayaa in Traderada Daacad ay ka tahay o kaliya ay Helaan Jaaniskaas.
Imisa ayeey qaadaneysa in Accountiga la ii furo?
Sida Caadiga waxad ku heleysa 1 Maalin, ugu badnaan 2 Maalin oo Maalmaha Shaqada ah.
Ma Jira Wadan aan la iska Diiwan galin karin?
Maya, Wadankasta ayaa joogi karta, balse waa in aad Heysataa Pass/ID iyo Cadeenta Meesha aad Dagantahay.
Fa’idada aan Sameeyo halkee ayeey igu soo dhaceysa?
Lacagta waxay kugu soo dhaceysa, Local Bankiyada, Sida Premier Bank,Salama Bank, Mobile Wallet Adiga oo markaas Si Cash ahan ula bixi kartid, Hadii aadan Banki dooneenin, Soo Dagso Sopay* app, kadibna lacagta Cash ayaad kula bixi karta Magaalo waliba.
*Sopay waa App Free ah oo Lacagta kuugu soo dhaceyso (Mobile Wallet), kadibna Cash aad ula bixi kartid, waa Shirkad Somaliyeed, Lacagta waxaad Cash uga Qadneysa Bakaal oo dhan.
Maxa dhacayo kadib Markii aan Dalbado Accountiga?
Kadib markii Documentigaga aan Eegno, Wax aynu Kaaga Sameen doona Accountigaga Borkerka, kadibna waxay Investorada ku shubayaan Lacagta aad Dalbatay, kadibna waan ku soo Direynaa isla markiiba MT4 Numberkaaga iyo Passwort kaga, Si aad u bilaawdo trade ka.
Profitka aan Sameyo ma ku bixin karaa Lacagta Kirada Accountiga?
Haa, Mar waliba oo aad Sameysid 5% waxaad awood u leedahay in aad la baxdit, bishii halmar bay lacagtu isu gu kaa soo dhaceysaa
Imisa ayaa Accountiga la’iga Kireenaya Bishii?
Accountiga ugu Wanaagsan ee Traders Kireystaan waa midka 50Kun Dollar, kaas waxaad ku Kireysan kartaa 333 Dollar, halka midka 25Kun Dollar aad ku Kireysan kartid 144,99 Dollar Bishi.
Maxay tahay Sababta Investors Lacagta igu Aminayaan?
Investorada waxay Leeyihiin team Riskiga u Manage Kareeyo, iyaga oo aamin San, Hadii Traderka uu cabsi la’aan Trade kareeyo, Raadinayana % aad u yar, in Jaaniskiisa Guusha ay badantahay. Sidoo kale Investorada waxaa Lacagtooda ugu shaqeen jiray Hedge Funds, halkaas oo ay Hal System ugu shaqeenayeen, balse hada madaama Lacagta loo qeebshay Traders badan, Mid hadii uu qasaaro kan kale ayaa Fa’ido soo xareenayo.
Goldstarlive Maka Helayaa Caawin FX Waxbarasho ama Signals?
Maya Signals, kama Heleysid, maxaa yeelay Ujeedkeenu waa in aan Helnaa dad iyagu Talent leh. Balse Telegram Groupkeena waad ka heli kartaa Caawinaad Fikir Trade ah oo aan Waajib ku aheyn Goldstarlive
Hadii aanan Somaliya Joogin, Sidee ayan Profitka kuhelaya?
Waxaad Lacagtaada ku heleysaa qaab Xawaalad ah, kadib markii ay kugu soo dhacdo Mobil Wallet, ama waxaad furan kartaa Diaspro Bank Account oo Somalia ku yaalo.Adiga ayey kugu xirantahay labadaas qaab.
Hadii aan Su’aal Dheeri ah qabo, yaa iga Jawaabayo?
Su’aal waliba waxaa kaaga jawaabayo, Partner ka Referal Code kiisa aad isticmaashay, sidoo kale Support Teamka telegram ee Shirkada Goldstarlive, iyaga oo kaa Caawinayo wax waliba oo su’aal ah oo dheeri ah adiga oo ku soo Biirayo Groupka Telegram https://t.me/Goldstarlive
Kadibna Team Caawiyo telegram koda ayaad ka dhax heleysaa Telegram kaas ama
https://t.me/teamcawiye2020 Halkaan Guji si toos ah si Teamka ku caawiyo.